Chhaharaa | वीपीको विचार कांग्रेसले छाडिसके
वीपीको विचार कांग्रेसले छाडिसके
चित्रराज उपाध्याय ब्राह्मण
पश्चिमाहरुले नेपाललाई आधार इलाका बनाएर धर्मनिरपेक्षको आडमा नेपाल टुक्रयाएर इसाईकरण गर्ने खतरनाक खेलमा लागेका छन् । २०७८ साल असार २९ देखि अमेरिकाले ठूलो षडयन्त्रकासाथ अबौं पैसाको बलमा आफ्रनो एजेन्ट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ । यो पाँच दलीय गठबन्धन सरकार इसाइले बनाएको सरका हो भन्दा अन्यथा
चीनको संसारमा बढदो प्रभाव देखेर विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका चीनसँग आक्रोशित छ । स्वतन्त्र तिब्बतको मुद्धाको निहु बनाएर, नेपाललाई आधार इलाका बनाएर, चीन माथि आक्रमण गर्न एमसीसी पारित गराएर दलबल सहित अमेरिका नेपालमा प्रवेश गराइदैछ । अब देशको अवस्था कस्तो होला ? अनुमान गर्न कठिन छ । नेपाल जुनसुकै बेला अफगानिस्तान र इराक हुन सक्छ । भारतले भुटान बनाउन सक्छ । यस्ता देशद्रोहीहरुको सत्ता छ अहिले
नेपालमा । त्यसले हामी भन्छौं– नेपालको लागि सबैभन्दा खतरनाक शत्रु अमेरिकी साम्राज्य, इयू र इसाईहरु हुन् ।
इसाईहरु अहिलेसम्म किन नेपालसँग आक्रोशित छन् भन्ने कुरा वडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै हो । काठमाडौंका राजा जयप्रकाश मल्ललाई प्रभावमा लिएर इसाईहरु धर्मपरिवर्तन गर्न नेपालमा आएका थिए । त्यसमा पनि कीर्तिपुरमा कब्जा जमाएर पृथ्वीनारायण शाह रहेको अवस्थामा केपुचीन पादरीले पृथ्वीनारायण शाहलाई अघि बढ्न नदिन जयप्रकाश मल्ललाई इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई पत्र लेख्न पठाई त्यसपछि कर्नेल किल्लकको नेतृत्वमा अंग्रेजी पल्टन सिन्धुलीगढीसम्म आइपुगेको थियो । त्यो समयमा सिन्धुलीमा रहेका मुगाटारका जयनारायण प्रसाईले थाहा पाएर बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहलाई पत्र लेखि पठाएको र त्यही पत्रबाट जानकारी पाएर पछि पृथ्वीनारायण शाहका सेनापति रामकृष्ण कुवर, बंशीराज पाण्डे, जयनारायण मगर, बंश गुरुग, जयनारायण प्रसाइहरु लगायत गोर्खाली योद्धाहरुबाट अंग्रेजी फौज सिन्धुलीगढीबाट लखेटिएका थिए । त्यस लडाईमा अंग्रेजका १६ सय फौज मारिएका थिए भने ८०० फौज ज्यान जोगाएर भागेका थिए ।
अंग्रेजी फौज जयप्रकाश मल्लले झिकाएको थापा पाएपछि पृथ्वीनारायण शाहले केपचिन पादरीहरुलाई वि.सं. १८२५ तिर नेपालबाट लखेटेपछि नेपालमा २००७ सालभन्दा अगाडिसम्म इसाईहरु छँदै थिएनन्,उनीहरूले नेपाल प्रवेह गर्न पाएका थिएनन् । २००८ सालपछि क्याथोलिक पादरी आएर ‘युनाइटेड मिसन टु नेपाल’ संस्था खडा गरेर काठमाडौं र ललितपुरमा सेन्टमेरीज, सेन्टजेभियर्स स्कुल स्थापित गरेका थिए । उनीहरूले पाल्पामा मिसन अस्पताल खोलेका
थिए । २०३६ सालभन्दा अगाडि एक हजार नेपालीलाई पैसाको बलले उनीहरूले क्रिस्चियन बनाएका थिए ।
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सत्ताका अगुवाहरुलाई हात लिएर भित्रभित्रै धर्म परिवर्तन गराएका थिए । २०६३ सालपछि त माओवादी केन्द्रको सक्रियता र आड भरोशामा धर्मनिरपेक्षको नाममा धर्मपरिवर्तन गराएर नेपालको चीरहरण गर्न लागेका छन् । पैसाको बलमा गाँउघरमा गरिव बाहुन, तामाङ, गुरुङ, मगर,राई, लिम्बू, दलित र अन्य जनजातिलाई हिन्दुधर्मको वद्ख्याँई गरेर धर्मपरिवर्तन गराउँदै आएका छन् । अमेरिकाले मात्र ख्रिस्तानीकरण गर्न नेपालमा ७० करोड डलर बर्सेनि खर्च गर्दै आएको छ । २०६३ सालको जनआन्दोलनमा माओवादीलाई सहयोग गरेर तोडफोड गर्दै नेपालको गौरवमय मान्यताहरु माथि आक्रमक हुँदै आएका छन् । अहिले नेपालको परिस्थिति यस्तो छ कि नेपालमा भारत र अमेरिकाको सक्रिय उपस्थिति देखेर चीन धेरै सशंंकित भएको छ । यहि अवस्था रहिरहयो भने चीन र भारतको बीचको तानातानमा अमेरिकाको प्रवेश भएर नेपाललाई युद्धभुमीमा परिणत गराउन सक्ने अवस्था सामुन्ने आउन लागेको देखिदैछ ।
२०७१ सालको प्रारम्भदेखि भारतीय कांग्रेस(आई)को अमेरिकी र पश्चिमा सत्ता भासिएर भारतमा हिन्दुवादी राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा आएको छ । भाजपा विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य बनाउने नेपालीको चाहनाको बिरुद्ध लाग्ने छैन । कांग्रेस(आई)की सोनीयाँ गाँधी र यूरोपका इसाई राष्ट्रहरुको दबाबमा नेपालमा संविधानसभाबाट धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र,संघीयता लादिएको स्पष्ट भैसकेको छ,यही भएर नेपालमा धर्मनिरपेक्षता भएकोमा भाजपा आक्रोसित भएको छ । विश्वको एक मात्र हिन्दुअधिराज्य–नेपालको नामोनिसान मेटाउन नेपालकै पार्टीका गद्दार नेताहरुलाई पैसा र पदको लोभमा पारेर धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र लाधेर सोनीयाँ गान्धीले यो क्षेत्रलाई युद्धभूमिमा परिणत गराउन खोजेकी थिइन ।
नेपालका कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसवादी दलहरु जो जति छन्, ती सबै अहिलेसम्म कांग्रेस (आई)की सानीयाँ गान्धीको मार्गदर्शन र अहिले यूरोपका इसाई राष्ट्रहरुको मार्गदर्शन अनुसार चलिरहेका छन् । त्यसैले यी कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र,जसपा, लोसपा ती सबै देशद्रोही अपराधी दल हुन। रूपमा यी छुट्टा छुट्टै दल जस्तो देखिएतापनि सारमा यी सबै एकै दल हुन, विदेशी दलालहरु दलहरू हुन ।
त्यसमा पनि २०७८ साल असार २९ देखि अमेरिकाले आफ्रनो एजेन्ट कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाररलाई ठूलो षडयन्त्रकासाथ अदालतको परमादेशबाट अबौं पैसाको बलमा प्रधानमन्त्री बनाएर स्वतन्त्र तिब्बतको मुद्धा लिएर नेपाललाई आधार इलाका बनाएर चीन माथि आक्रमण गर्न एमसीसी पारित गराएर दलबल सहित अमेरिका नेपालमा प्रवेश गराइदैछ । त्यसवेलन नेपालको अवस्था कस्तो होला ? यस्ता देशद्रोहीहरुको सत्ता छ अहिले नेपालमा । नेपाली कांग्रेस आफूलाई बीपीवादी पार्टी भन्छ तर बीपी कोइरालाको विचार राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रलाई छाडिसकेको छ । उदार प्रजातन्त्रको चीरहरण गर्दै कम्युनिष्ट र इसाईहरुसँग काँध मिलाएर हिडेकाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा न घर न घाटको भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र फुटेर पखेटा उम्रिएका कमिला जस्तो भइसकेका छन् । एमालेभित्र पनि आआफ्नो चिहान गन्दैछन् । प्रचण्ड र डा.बाबुराम भट्टराई छेपाराले रङ फेरेको जस्तो हिजो लुट मच्चाएको अर्बौं सम्पत्ति लुकाउनमा लागेका छन् । पद र पैसाको लागि आफूहरुलाई बेच्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र कथित मधेसीवादी दलहरुको अब लुकेर हिड्ने पनि अवस्था आउन सक्छ । नेपालको तराई, पहाड, हिमालका देशभक्त नेपालीहरुको कठघरामा यी देशद्रोही अपराधीहरु पर्नेछन् । समयले पाटो फेरिसकेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते विदेशीको इसारामा घोषणा भएको संविधानको समर्थन गर्न सकिदैन । राष्ट्रियताको प्रतिकको रुपमा स्थापित संवैधानिक राजसंस्था र विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य कायम नभएसम्म हामीहरु देशद्रोहीहरुको विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गरिरहने छौं ।